Ny vovo-dronono vita amin'ny alimina dia vita amin'ny vovo-alumina vita amin'ny sodium ambany vita amin'ny alàlan'ny fitotoana sy fanodinana lalina.
Ny volavolan-kevitry ny fanasan-damba dia natao araka ny lalàna mifehy ny fahasalamana sy ny fiarovana ampiasaina amin'ny zavamaniry mpivarotra mikasika ny fahamendrehan'ny rafitra metaly, ny fananan'ny akora marefo ary ny filan'ny metaly. Ohatra, ny hafainganam-pandehan'ny metaly, ny fanoherana ny abrasion ary ny toetran'ny hafanana amin'ny fonony.
Amin'izao fotoana izao, ny fangatahana tsena ho an'ny aliminioma avo lenta dia mitombo, ary ny mpanjifa farany dia manana fepetra ambony sy avo kokoa amin'ny kalitao. Amin'ny ankapobeny, ity karazana fangatahana alimina alimina avo lenta ity dia mitombo mankany amin'ny fironana milina matevina, avo hery, mora zahana. Io fangatahana ny fahadiovana aliminioma alohan'ny fanariana io dia mitaky fitakiana bebe kokoa.
Izy io dia ondran'ny gazy tsy mitongilana (azota na argon) na gazy mifangaro (argon-klôro na vatana gazy-klôro mpiorina) ao anaty aluminium alona, ​​amin'ny alàlan'ny rotor na fantson-tsolika mihodina mankamin'ny alim-by vita amin'ny bolona kely, ary miparitaka mitovy amin'ny aliminiôna misy rano. Ny hidrogen ao anaty alimo alim-pito dia miely hatrany amin'ny bolongana gazy tsy mitongilana, ary rehefa miakatra amin'ny tampon'ny aluminium alona ny gazy entona, dia tontosa ny tanjon'ny fanesorana hidrôzenina sy ny sombin-tany.